ယူကရိန်းနိုင်ငံ၌ အမေရိကန်သံရုံး ပြန်လည်ဖွင့်လှစ် - Xinhua News Agency
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ရှိ အိမ်ဖြူတော် ဧည့်သည်လည်ပတ်ဆောင်ရှေ့၌ အမေရိကန်အလံလွှင့်ထူထားသည်ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ် ၁၆ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဝါရှင်တန် ၊ မေ ၁၉ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ယူကရိန်းနိုင်ငံ၌ ရုရှားက အထူးစစ်ဆင်ရေးတစ်ရပ် စတင်လုပ်ဆောင်တော့မည့်အချိန်ကတည်းက ၎င်း၏ သံရုံးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိတ်ထားခဲ့ပြီး နောက်သုံးလအကြာတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ယူကရိန်းနိုင်ငံ၌ ၎င်း၏ သံရုံးကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်က မေ ၁၈ ရက်တွင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
“ ဒီကနေ့မှာတော့ ကိဗ်မြို့က အမေရိကန်သံရုံးမှာ လုပ်ငန်းတွေ ကို ကျွန်တော်တို့ တရားဝင် ပြန်လည် လည်ပတ်နေပါပြီ” ဟု အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဝက်ဆိုက်၌ ထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာချက်တစ်စောင်တွင် ဘလင်ကန်က ပြောကြားခဲ့သည်။ ကိဗ်(Kyiv)သည် ယူကရိန်းဘာသာစကားကိုအခြေခံ၍ ယူကရိန်းမြို့တော်ဟူသော ရိုမန်ဘာသာ စာလုံးပေါင်းဖြစ်သည်။
ရုရှားနိုင်ငံနှင့် ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော စစ်ပွဲတွင် “သူတို့နိုင်ငံကို ကာကွယ်နေကြတဲ့ ယူကရိန်းပြည်သူတွေနဲ့အစိုးရကို အမေရိကန်နိုင်ငံက ဆက်လက်ထောက်ခံအားပေးသွားမှာပါ” ဟု အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘလင်ကန်က ဆိုသည်။
ထို့ပြင် “ ကိဗ်မြို့ဆီ ပြန်လာနေကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်မယ့်အစီအစဉ်တွေကိုလည်း ဖြည့်စွက်ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။ လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေနဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို သေချာခိုင်မာအောင် ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားပါတယ်” ဟု ဘလင်ကန်က ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ယူကရိန်းနိုင်ငံရှိအမေရိကန်သံရုံးကို ယူကရိန်းနိုင်ငံထဲ ရုရှားက အထူးစစ်ဆင်ရေး တစ်ရပ် မစတင်မီ ၁၀ ရက်အလို ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်တွင် စတင်ပိတ်ထားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ကိဗ်မြို့ရှိ ၎င်း၏ သံရုံးဝန်ထမ်းများကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ရက်တွင် နေရာ ပြောင်းရွှေ့မှု စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ထမ်းများကို ယူကရိန်းနိုင်ငံ အနောက်ဘက်ပိုင်းရှိ Lviv မြို့သို့ ရှေ့ဦးစွာ ပြောင်းရွှေ့ထားခဲ့ပြီး ယင်းနောက် ယူကရိန်းနိုင်ငံထဲတွင် အထူးစစ်ဆင်ရေးစတင်ရန် ရုရှားတပ်များဝင်ရောက်လာချိန်တွင် အမေရိကန်သံရုံးဝန်ထမ်းများသည် ယူကရိန်းနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
WASHINGTON, May 18 (Xinhua) — The United States reopened its embassy in Ukraine, Secretary of State Antony Blinken said Wednesday, three months after it ceased operation in anticipation that Russia would launchamilitary operation in the country.
“Today we are officially resuming operations at the U.S. Embassy in Kyiv,” Blinken said inastatement posted on the State Department’s website. Kyiv is the Romanized spelling of Ukraine’s capital city based on the Ukrainian language.
The secretary said the United States will “continue to support the government and people of Ukraine as they defend their country” in the ongoing war with Russia.
The United States, Blinken said, has taken “additional measures to increase the safety of our colleagues who are returning to Kyiv and (we) have enhanced our security measures and protocols.”
The U.S. embassy in Ukraine closed on Feb. 14, 10 days before Russia launched the special military operation in the country.
The United States began evacuating its embassy staff on Feb. 12. State Department personnel first relocated to the western Ukrainian city of Lviv, and then left the country after Russian forces entered Ukraine to conduct the military operation.
Photo – Photo taken on March 16, 2020 shows the White House Visitor Center in Washington D.C., the United States. (Xinhua/Liu Jie)